Apple Manitatra ny fe-potoana farany ho an'ireo mpamolavola mba hampidirana ny fepetra fiarovana ATS | Vaovao IPhone
Fanambarana kely navoakan'ny Apple ho an'ny mpamorona izay nohazavaina fa ny fe-potoana fampiasana ny App Transport Security amin'ny fampiharana izay alefa any amin'ny App Store dia nohalavaina. Ity fepetra fiarovana ity izay nampiharina hatramin'ny nanovana ny iOS 9 sy ny OS X 10.11 El Capitan raha misy ny fangatahana ho an'ny Mac, tsy takiana amin'ny fampiasan'ny mpamorona izany satria azo ampavitrika na hofoanana ho an'ny fampiharana izy io, saingy izy io dia protokol iray izay manome fiarovana bebe kokoa ho an'ny mpampiasa rehefa mandefa data amin'ny fampiasana mivantana na any aoriana izy amin'ny alalany.
ATS no fanafohezana ny App Transport Security, izay midika hoe fiarovana ny angona. Ity dia fepetra iray manatsara ny filaminana sy ny fiainana manokana ataon'ireo mpampiasa amin'ny alàlan'ny fitakiana ny fampiharana ampiasainay amin'ny fitaovantsika mampiasa fifandraisana azo antoka amin'ny tamba-jotra amin'ny HTTPS.
Tamin'ny fihaonambe farany an'ny orinasa Cupertino dia nampitandrina izy fa mandra-pahatapitry ny taona dia manana fotoana hampifanarahana ity protokolovan'ny fiarovana ity amin'ny fampiharana ny mpamorona. Ity ny rohy izay ahafahanao mamaky ny fanambarana fohy avy amin'ny tovolahy avy any Cupertino ho an'ny mpamorona. Ankehitriny ny fe-potoana nomen'ny Apple izany efa akaiky ny 1 Janoary tamin'ny taona ho avy nofoanana tanteraka ary ity famoahana ity dia tsy mampiseho fetra ho an'ireo rindranasa mpamorona hampiditra ny fepetra fiarovana ATS.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Apple dia manitatra ny fe-potoana farany hampidiran'ireo mpandrindra ny fepetra fiarovana ATS